ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: ကဗျာမဆန်တတ်သော ကျနော် ….
ငှက်ဝတ်စုံလေး မြင်ဖူးချင်သား... :)
စာနဲ့တွဲဖတ်မှဘဲငှက်မှန်းသိတာမောင်မျိုးရေ... :D ပုံချည်းဘဲဆို မဲမဲအတုံးလေးတွေလို့ဘဲမြင်မှာ
တန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုသလိုပေါ့. အရင်က မြန်မာပြည်မှာနွေရောက်ရင် ဥသြသံလေးကြားတိုင်း လွမ်းလွမ်းဆွေးဆွေး. ဒီရောက်တော့ မိုးရွာလဲ ဥသြ နေပူလဲ ဥသြ. သြသြနိုင်လွန်းလို့ အလွမ်းအဆွေးတွေတောင် ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက်လေ
ခိုညည်းသံက တကယ်နားကြားကပ်စရာ ကောင်းတယ်..ဒီအိမ်ထဲကကောင်က ရေဗူးနဲ့ဆော်တယ်ဟလို့အချင်းချင်း လက်တို့ ထားကြတာဖြစ်မယ်...:P
ကြောင်မာနနဲ့ ငှက်ကို ခုတ်မလွှတ်တာ တော်သေးတာပေါ့